Mogadishu Journal » Dowladda oo lagu eedeeyay in ay hub iyo Ciidan geysay Baydhabo
Dowladda oo lagu eedeeyay in ay hub iyo Ciidan geysay Baydhabo
Mjournal :-Wasiirka Dastuurka maamulka Koonfur Galbeed iyo ahna Afhayeenka Golaha Iskaashiga maamul goboleedyadda Cabdullaahi Sheekh Xassan ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ku eedeeyay in saacaddihii lasoo dhaafay Ciidan iyo hub ay geysay Magaalada Baydhabo.
Waxaa uu sheegay diyaarad siday Ciidan in ay gaartay Magaalada Baydhabo,islamarkaana lagu doonaayo in lagu carqaladeeyo doorashadda Koonfur Galbeed ka dhici doonta Bisha soo socota.
Saacaddihii lasoo dhaafay ayaa waxaa baraha bulshadda laga hadal haayay in dowladda Soomaaliya ay waddo Wasiir ka mid ah Wasiirada dowladda ee kasoo jeedda degaanada maamulka Koonfur Galbeed ,islamarkaana ay shalay Baydhabo ay geysay Ciidan iyo Gaadiidka aysan xabado karin.
Hadalka Wasiirka ayaa yimid ka hor inta uusan daqiiqo ka hor Muqdisho ka duulin C/casiis Lafta Gareen oo ah Wasiirka Tamarta oo la filayo inuu ku dhawaaqo Musharaxnimadiisa xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Maxkamadda Ciidamada oo sii deysay eedeysanayaal lagu waayay dambi
Puntland oo war ka soo saartay dagaal ka dhacay gobolka Sool